Imibukiso ye-Anime Eqala NGOKUBI Kodwa Thola Okumangazayo Ngemuva kwalokho - Okunye
Imibukiso ye-Anime Eqala NGOKUBI Kodwa Thola Okumangazayo Ngemuva kwalokho
Ngiyazizonda izinhlelo ze-anime ezihamba kancane. Cishe nawe uyefana.
Kuyinto kanzima ukudlula ku-anime lapho uzizwa uthanda ukusika ingalo yakho bese ulahla ufile… Ngoba kuyisicefe kakhulu kuba sengathi ubuka ngokuhamba kancane.
Ngenhlanhla - kukhona ithemba, futhi amanye ama-anime aba ngcono ekugcineni.
Ngizizwe ngendlela efanayo ngayo YONKE imibukiso ye-anime engizoyisho kulokhu okuthunyelwe.
Ake sikhulume ngakho.
Imibukiso ye-Anime Eqala Ngokubi Kodwa Ithuthuke Ngesikhathi:
ILog Horizon uhlobo lweMMORPG lochungechunge lwe-anime. Lapho abalingiswa babambeka khona ngaphakathi komdlalo obiziweyo Izinganekwane Zabadala.
Ngemuva kokuzwa abantu abaningi bekhuluma futhi bakuqhathanise INKANYEZI (okungenangqondo), ngakunikeza ithuba.
Ngaphandle kweqiniso ukuthi lutho njengeSAO, Ngicishe ngehla Ngena Horizon kuze mhlawumbe isiqephu 8 noma kunjalo.
Yilapho i-anime iqala ukuba yinhle, futhi isenzo siqala ukubamba iqhaza futhi kufanelekile ukubukwa.
Ngaphambi kwalokho - ubambekile ekubukeni abantu bekhuluma sh ** ngeziqephu eziningi zokuqala… Kufike ezingeni lokudinwa. Njengenye yalezo zinkulumo ze-looong ohlangabezana nakho okubonakala kungafiki ephuzwini.
Yileyo ndlela engangizizwa ngayo nge-Log Horizon, kuze kube yilapho i-anime ithuthuka kakhulu futhi ingena ngesitayela se-adventure nesenzo seMMORPG.
Ngakho-ke gcina lokho engqondweni uma isipiliyoni sakho siyefana.
2. Izinja Ezilahlekile zeBungou
Manje - Izinja Ezilahlekile zeBungou kuyinto kude kusukela ekubeni uhlobo olucotha kakhulu lochungechunge engilubukile. Okungigcina ngiqhubeka kwakuyizinhlamvu ezixakile, eziyinqaba nezingajwayelekile.
Kakhulu Osamu Dazai nezingxoxo zakhe ezingahleliwe no-Atsushi Nakajima (intandane engenakho ukuzethemba).
Ukukhathazeka okungapheli kuka-Osamu 'ngokufuna ukuzibulala' kuzizwa kuyisidina nokho.
Iziqephu ezimbalwa zokuqala, ikakhulukazi i-1-2 amandla kukwenze ukhungatheke noma ubuze ukuthi hlobo luni lombhedo olubukayo.
Futhi wenzani ngempilo yakho.
Kepha njengoba i-anime ithuthuka, bese uqala ukufunda nge-ejensi eyimfihlo yabantu abane amakhono angaphezu kwawemvelo, konke ukungabaza kwakho kuyagezwa.
Indawo yesenzo phakathi kuka-Atsushi, Akutagawa no-Osamu iyisiqalo sabo bonke isenzo eBungou Stray Dogs.
Uhlobo okunzima ukungaluthandi. Futhi isizini 2 iba ngcono kuphela.
Kuyafaneleka: 20 Kochungechunge Lwama-Anime Omnyama Kakhulu
Angikwazi ukukutshela kusondele kangakanani Bengizokwenza ukushiya iToradora BONKE ndawonye.
Eqinisweni iqiniso Nangempela ngayilahla. Futhi washiya lapho.
Kodwa ngenxa yelukuluku elithile elixakile, nginqume ukubona ukuthi kungenzeka yini uma 'kungangcono'. Njengoba sengizwe izinto eziningi ezinhle ngayo (kukhiqizwe ngabasebenzi bakwaJ.C).
Ekuqaleni, ikakhulu imayelana UTaiga Aisaka noRyuuji Takasu.
Futhi iTaiga ibonwa njalo ukuhlukumeza uRyuuji, ngamazwi nangokomzimba.
Kuyakhathala ngemuva kwesikhashana. It cishe wezwa sengathi ukuhlukunyezwa okubonwe kuThe Familiar Of Zero.
Akusizi ukuthi iTaiga iphelele ***** ngaphandle kwesizathu esizwakalayo.
Phakathi kwesiqephu 1 - 5 leli yihlaya eligijimayo eliqala ukudamba, ukuhlangana kanye nokungasho lutho.
Futhi i-anime ngokuvamile ayibonakali 'inikela' noma yini ethakazelisa ngokwanele engingayibonanga izikhathi eziyi-1000.
Noma ngicabange kanjalo…
Cishe kusiqephu sesi-7 kuya phambili, iqala ukuba yinhle.
Ukuthuthukiswa kwezinhlamvu kuqala ukungena.
Uqala ukufunda ngabalingiswa ngokwengeziwe (izindaba ezingemuva, njll).
Amahlaya awakaze abe mabi, kepha aba ngcono kakhulu (ngokuhlekisa angisho ukuthi uMC ushaywa ngesibhakela).
Futhi i-chemistry phakathi kwezinhlamvu iqala ukumila.
Ukungasho ukuthi iTaiga Aisaka iveza okuningi ngaye futhi uqala ukuxhumana naye okuningi kakhulu (akayona imbumba ngenxa yayo).
Kukhona mhlawumbe izizathu eziyisigidi, kepha i-anime iqala 'ukuzizwa' ipholile kakhulu, iyathakazelisa futhi ayilibaleki.
I- Okuningi I-Toradora iqhubeka, i-crazier futhi ithola imizwa engaphezulu.
Ekugcineni kuphenduke intandokazi yomuntu siqu kwezothando, ucezu lwesigaba sempilo.
Ngoba i-anime yokwenza wena inzondo bese uyayithanda, awukho amashumi e-anime angenza uzizwe Kokubili ngasikhathi sinye.
Futhi yilokho okwenza iToradora ibe yinhle uma usungene kuyo.
4. Impi Yenkolo yeChrono
I-Chrono Crusade iyi-classic emehlweni ami, kodwa bengingeke ngikukholwe uma ngishiya ngokushesha kakhulu.
Kuchungechunge lwedimoni / isenzo ngoRosette Christopher nobudlelwano bakhe noChrono. Ngubani idimoni.
Kukhona amathani ezinkomba zenkolo, nawo, ane isihloko esishukumisa ingqondo lapho ungena kakhudlwana kuso.
Ngakho-ke kungani iqala kabi noma ihamba kancane?
Ngicabanga ukuthi konke kuzofinyelela kukho - akukho lutho oluzizwa lukhethekile ngalo ekuqaleni.
Uthola into yakho ejwayelekile 'yekhehla elikhohlakele', umlingiswa ophambili onomdlandla, namandla, futhi umbhedo 'abonakala' ukusukuma kuwo.
Kepha konke lokho kuguquka kakhulu njengoba i-anime iqala ukuba yimbi. Futhi isakhiwo siqala ukuba mnyama njengephepha elimhlophe elipendwe ngombala omnyama.
Kuyafaneleka: Izithandani Ezingabonakali Ngokusobala Zama-Anime Ezingcono Kakhulu
5.Chuunibyou, Love & Other Delusions
UChuunibyou unjalo omunye i-anime ngibukele (i-Kyoto Animation) eqala kabi futhi ingenze ngitatazele.
'I-Cringe' empeleni iyingxenye ye-charm ye-anime. Umlingisi ophambili: URika Takanashi osemusha ongu 'Chuunibyou' ngubani namanje ukholelwa ukuthi unamandla amakhulu, ngemuva kwakho konke.
uchungechunge olukhulu lwe-anime sonke isikhathi
Ngokufana neToradora, ngashiya i-Chuunibyou futhi angikaze ngibuye…. Ngize ngicabange ngezinto “ezimbalwa” engizithandile, ngakho-ke ngiphinde ngazinika.
Ngemuva kwesiqephu sesi-5-ish, njengeToradora, uChuunibyou uqala ukuthola i- okuncane kubucayi kakhulu. Ngokwethulwa kwezothando nokuthuthuka komlingiswa omncane.
Bese ukhumbula - lolu chungechunge lwe-rom-com , futhi noma ngingakhulumi kakhulu ngayo, ingenye yezinto ezihlekisa kakhulu engikujabulele ukuzibona.
6. D. Umuntu Ompunga
D. Umuntu Ompunga akaqali “okubi” ngamagama amaningi kangaka… I-slow effin ihamba kancane futhi ayiqinisekile ezigabeni zokuqala.
Kepha uma ungadlula eziqephu zokuqala ezibonakala zihamba kancane futhi zingaqinisekile, uD.Grey Man ungomunye weShounen ozuzisa kakhulu engihlangane naye.
D. Grey Man inokuzazisa (njenge My Hero Academia).
Akuzwakali njengeShounen engiyibukile.
Umlingisi oyinhloko unomklamo othakazelisayo, futhi uyamangalisa amakhono akhe (neziqalekiso).
Abalingiswa besifazane ku-D. Gray Man ababona 'izintombi ezisosizini' futhi kunalokho - badlala i- eqinile indima endabeni.
Futhi imibala nokugqwayiza kunikeza umuzwa 'wokubi, omnyama' engikuthandayo ngakho.
Kuyafaneleka: 38 Of The Greatest D. Gray Man Quotes Kusuka Kubalingiswa Abakhulu
Fate Apocrypha, ngokusho komphakathi we-anime, akuyona into engcono kakhulu esiyibonile kuhlobo lwenhlekelele.
Kungenzeka ngavuma eziwombeni zokuqala ezinhlanu zokubuka. Ngemuva kwakho konke - imiphumela yomsindo ezigcawini zempi akuyona eyokuthinta ingqondo engiyizwile.
Futhi kuzwakala kancane ohlangothini oluhamba kancane, olungenasiqiniseko futhi akukushayi nge- 'bang'.
Kepha lokho kuyashintsha.
Ayiphelele njengeFate Zero, kodwa kunjalo okuningi kungcono kuneFate Stay Night. Futhi ngizizwa i-Fate Apocrypha ithuthukisa ukuqhubeka kwakho okungena kuyo.
Isenzo, abalingiswa, ukujula, isakhiwo - I-Foc Apocrypha iyi-9/10 eqinile lapho konke sekuqala ukungena endaweni.
Okuhlobene: Izingcaphuno ezi-11 ezinhle zabagibeli ezimangazayo ezivela ku-Fate Zero Anime
8. I-Full Metal Panic
I-Full Metal Panic ingesinye seziboniso ezimbalwa eziqala kancane, kepha hhayi ezimbi noma ezimbi kakhulu.
Angibanga nankinga yokuqeda isizini yokuqala ye-FMP. Kepha into - Ngazizwa cishe ngingeneliseki.
Bengicabanga ukuthi kunokunye okungaphezu kwalokho.
Kepha-ke isizini 2 (no-3) iza. Futhi u-sh ** uyahlanya kakhulu futhi ubandakanya angikholwa ukuthi ngike ngangabaza i-FMP.
Ngisho izilinganiso (yize ngizonda ukusebenzisa izilinganiso) zikhombisa ukuthi isizini yokuqala ye-FMP yehle kangakanani kunesizini yesibili.
Luhlobo lwe-anime oluba ngcono, kodwa uhambo lokukubona konke luza ekugcineni luhamba kancane futhi alucindezeli kakhulu.
9. Impi Yezinkanyezi
Uyazi ukuthi yini mina inzondo mayelana nemibukiso enjengale? Banamandla ngaphansi. Kepha ngoba kugcwele ama-cliches futhi 'ukwenzelwa abalandeli' okuyisiphukuphuku - konakalisa noma yimaphi amathuba okujatshulelwa ngabalandeli abaningi.
Thatha isiqephu sokuqala njengesibonelo, lapho umlingiswa oyinhloko iwela kuma-boobs amantombazane.
Akuwona umbono omuhle kakhulu, yingakho iMpi Yezinkanyezi iqala kabi kangaka.
Kepha ngandlela thile ngadlula kuwo ngabe sengiqhubeka.
Ngiyajabula ngokuthi ngikwenzile.
I-Asterisk War njengochungechunge lwezenzo / izinganekwane inemiqondo ethokozisayo. Njengokuthi amakhono asebenza kanjani. Futhi izingubo zabalingiswa zizizwa ngekusasa (ngendlela epholile).
Kodwa ingxenye enhle kakhulu mayelana nokukhula kwempi ye-Asterisk - ukubuka abalingiswa abaphambili abangu-2: Ubuhlobo bukaJulis no-Ayato buqhakaza.
Akuwona wonke ama-anime angakuthola lokho, kodwa Impi Yezinkanyezi yenza umsebenzi omuhle wabaphikisi besilisa nabesifazane, nendaba emnyama ebalandelayo bobabili.
Inuyasha uchungechunge olude, iziqephu ezingama-150 + okungenani. Futhi njengemibukiso eminingi yohlobo lwayo - akukho okuthokozisayo 'okukubambayo' ekuqaleni.
Kuzwakala nje njengochungechunge lomlando olungahleliwe nenja-idemoni lomlingiswa oyinhloko, nentombazane ewela 'emthonjeni' futhi iphelela kwelinye izwe.
Ine 'cliché' ebhalwe kuyo yonke ngamazinga anamuhla.
Lapho izigcawu zesenzo seziqala ukukha phezulu, bese kuthi ezothando nezomona ziphonswe ekuxubeni phakathi kwabalingiswa, izinto ziqala ukwanda.
Kunokuguquguquka okuningi okwenza u-Inuyasha abe i-anime ehluke ngokuphelele konke ndawonye.
Futhi ngandlela thile ikwazi ukwenza okuningi ngaphandle kokulahlekelwa ukugxila noma ukuba 'nje enye i-anime' engafanele ukukhunjulwa.
Okuhlobene: Izilinganiso ezingama-39 zakudala ze-Inuyasha
11. Ukuhamba kukaKino
I-Kino's Travels iyi-anime Ngithole ngokususelwa engxoxweni engiyibone ku-inthanethi.
Ukube bekungeyona leyo ngxoxo, bengingeke ngazi ngayo. Ngemuva kwakho konke - Angikaze ngibone noma yimaphi amawebhusayithi ayincoma.
Imayelana nomhambi obizwa ngoKino, isithuthuthu sakhe esikhulumayo, nokuthi sihamba kanjani emhlabeni. Ukuhlala ezweni ngalinye noma edolobhaneni izinsuku ezingekho ngaphezulu kwezingu-3.
Ukufunda okuningi ngangokunokwenzeka ngesikhathi sokuhlala kwakhe.
Ngokungafani nemibukiso ye-Shounen noma ye-horror (njenge-Attack On Titan) eqala isiqephu sokuqala nge-BANG, i-Kino's Travels i-adventure / ucezu lwempilo ngakho kuthatha isikhathi ukuhlaba umxhwele.
Kepha uma kwenzeka? Awukho umbukiso emhlabeni ofanisa ukujula kwe-Kino, izigcawu eziguqukayo, izinto zengqondo nezikhathi zefilosofi ezaziwa ngazo.
Kuyinto yobuciko ngokuphelele emehlweni ami.
Umkhandlu wabafundi ohamba phambili.
Kunconyiwe: Ungaphuthelwa yilezi Zibukiso ze-Anime 15!
4 Shido Itsuka Quotes Kusuka Usuku A Live Anime
Ishuzoku Ababuyekezi Isiqephu 1 - An Ecchi Anime Like You’ve NEVER seen
I-19 + Silly And Remorable Ranma 1/2 Quotes for For Anime Fans
Izilinganiso ezingama-4 zePiccolo Ezivela ku-DBZ Ezigcwele Ukuhlakanipha
Abalandeli be-Greatest Overlord Quotes abangama-26 bazokuthokozela
Ukuhlaselwa Kwama-Lily Bouquet: Kungenzeka Yini Le Ukuba Yinguqulo Yesimanje YeMadoka Magica?
Imboni ye-Anime Inenkinga YENKONZO, Hhayi Inkinga 'Yobuphukuphuku'
Le Guy Is the Most Loyal Anime Character Youll Ever See (Nasi isizathu)
17 Kwe-Anime Ejabulisa Ubuhle Kakhulu Owake Wabona
Usopolitiki Usabisa Ngokunquma IZIGIDI Ekuxhasweni Ngezimali, Ngoba INyuvesi YaseKent State Ifundisa “I-Anime” Kubafundi
i-anime enhle ongayibuka ngesiNgisi
i-anime ephezulu kakhulu yesikhathi sonke